DAAWO: Banaanbax Balaaran oo Looga soo Horjeedo Boobka Kenya ay ku Waddo Badda Soomaaliya (VIDEO)
September 21, 2016 – Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa iminka ka soconaya banaanbax aad u balaaran oo looga soo horjeedo booka Kenya ay ku waddo badda Soomaaliya. iyadoo ay kasoo qeyb galeen boqolaal dadweyne oo isugu jira madax iyo shacab, ku waas oo ka kala yimid Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Banaan baxan ayaa ah mid looga soo horjeeday damaca Dowlada Kenya ay ku dooneyso inay ku boobto qeybo kamid ah Biyaha Soomaaliya, waxa ayna dadka dhigayay banaan baxani ku qeylinayeen hal ku dhegyo ay uga soo horjeedeen hanti boobka Kenya.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale, oo kamid ahaa masuuliyiintii ka hadashay Banaan baxa ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay kasoo horjeedaan damaca Kenya ku dooneyso inay ku boobto biyaha Soomaaliya.
Waxa uu cadeeyay Gudoomiyaha in aysan jirin Cid iibsan karta Badda Soomaaliya islamarkaana aysan Shacabka Soomaaliyeed marna aqbali doonin Damaca Guracan ee Kenya ku dooneyso qeyb ka mid ah biyaha Soomaaliyeed.
Banaan baxani maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xili Maxkamada Caalamiga ah ee ICJ-da ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland, maanta maalinteedii Sadexaad loo fadhiyo dhagaysiga Dacwadaha labada dal.
September 21, 2016 tuugahaladilo2015
Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ oo Kenya u Qabatay 10 Bilood Gudahood Inay Kaga soo Jawaabto Dacwadda Badda ee Soomaaliya February 25, 2017
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo Sheegay in Kenya la siin doono 6 Bilood oo ay ku soo Jawaabto (VIDEO) February 4, 2017
DAAWO: Sawirrada Banaanbixii Maanta Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO) February 3, 2017